Indlu Yamaplanga Ka-Maynard, indlu yamaplanga ekwiMfazwe Yasekuhlaleni - I-Airbnb
Indlu Yamaplanga Ka-Maynard, indlu yamaplanga ekwiMfazwe Yasekuhlaleni
IMaynard Log Cabin yakhiwa ngumntu ohlala endlini emva kwemfazwe yasekuhlaleni. Siyisusile saza sayibuyisa saza sayenza yafumaneka ukuze iqeshwe. Iphumile kwi-intanethi, kodwa inekhitshi elipheleleyo, isitovu seenkuni kunye negumbi lokuhlala ezantsi. Kukho iibhedi ezimbini zakudala ezinomatrasi omtsha phezulu. Akukho mbane kodwa indlu yamaplanga inefenitshala yeekharaveni. Indawo yokuhlambela inezitya zokuhlamba kunye ne-outhouse. Indlu yamaplanga ingqongwe ziihektare eziyi-40 zamahlathi kunye namadlelo.
Le ndlu yamaplanga ineminyaka emalunga neyi-150 ibe yakhiwa ngu-Maynard kungekudala emva kweMfazwe Yasekuhlaleni. Sayithutha saza sayibuyisa kwaye ngoku ihleli kwintente esemaphethelweni ehlathi lethu. Ikhitshi elisebenza ngokupheleleyo linefenitshala endala eyenziwe ngeparafini nefenitshala yexesha elithile. Istovu samaplanga sishisa indlu yamaplanga kusasa. Izibane ezininzi zeparafini zenza kubekho ukukhanya emva kokutshona kwelanga. Iibhedi ezimbini eziphantsi zizinto zakudala zokwenyani ibe zinefenitshala eyenziwe ngezandla nemiqamelo emincinci. Iindwendwe ziyakwazi ukufumana iringi yomlilo ephandle nendawo yokoja. Iindwendwe kufuneka zizive zikhululekile ukubuka amahlathi kunye nendlu ekufutshane.
Indlu yamaplanga ikufutshane neAlexandria/iDouglas County Lakes kunye neLake Osakis eyaziwa ngokuba namathuba okuloba. Umlambo iLong Prairie ukwimizuzu nje kude kwabo bavuyela ukuhamba ngephenyane. Abamelwane bethu baseAmish badla ngokuba nemifuno emitsha ibe kukho iivenkile ezimbalwa eziqhelekileyo zaseAmish apho iimpahla zomsebenzi oqinileyo kunye nezinto zasekhitshini kunye nokutya okuninzi kunokuthengwa. Ichibi iCharlotte eLong Prairie linonxweme oludumileyo lokuqubha
I-Lake Carlos State Park ikumgama wemizuzu eyi-20 kwaye iSpruce Centre County Park kunye nendawo yembali ikude ngemizuzu eyi-15.
Sithanda ukubulisa zonke iindwendwe xa zifika ukuze sizichazele izinto ezimbalwa. Siza kufumaneka ukuze siphendule imibuzo okanye silungise iingxaki. Iindwendwe zivumelekile ukuba zityelele kunye nathi emini. Sinee-canoes ezimbini esinokuzisebenzisa kumachibi nemilambo yasekuhlaleni kwaye sinokunceda iindwendwe ukuba zihambise kwindawo oyifunayo.
Sithanda ukubulisa zonke iindwendwe xa zifika ukuze sizichazele izinto ezimbalwa. Siza kufumaneka ukuze siphendule imibuzo okanye silungise iingxaki. Iindwendwe zivumelekile ukub…